China Juda kiln - dingana famokarana 100 taonina / andro -Fiorenana sy mpamokatra tetikasa PEC | Juda
I. Ny maha-zava-dehibe ny fampivoarana ny haitao vaovao momba ny sokay
Ny sokay no fitaovana lehibe indrindra sy ilaina fanampiana amin'ny famokarana vy, famokarana karbôna kalsioma, famokarana marefo, famokarana alimina. Indrindra amin'ny vanim-potoana vaovao, ny teknolojia vaovao, ny vokatra vaovao dia manohy mampivelatra akora calcium dia be mpampiasa kokoa. Ny fampiharana dia nanaporofo fa ny teknolojia maoderina amin'ny laonam-boasary dia tena zava-misy sy hitsin-dàlana hitsin-dàlana ho an'ny orinasa vy sy vy, orinasan-tsolika karbida, orinasa mpanao «coking» sns. Amin'izao fotoana izao, ny tombony isaky ny taonina sokay dia nihoatra lavitra noho ny tombony vy, taonina vy, kalsioma karbôna taonina, coke taonina. Ireo orinasa izay nampihatra ny haitao maoderina vita amin'ny lafaoro dia nahazo tombony lehibe ary nahazo tombony ara-tsosialy lehibe kokoa. Na izany aza, orinasa maro no voafehin'ny fahatsiarovan-tena amin'ny fitantanana nentim-paharazana sy ny haavon'ny fitantanana ary tsy namolavola teknolojia famokarana lavenona maoderina mbola miankina amin'ny famokarana sokay tanimanga. Noho izany, raha te hofehezina tsara ny loto amin'ny lafaoro tanimanga isika dia tsy maintsy miankina amin'ny fampiharana ny lafaoro makirana maoderina koa hamahana ny olan'ny fangatahana.
Ilay antsoina hoe laonam-boasary teknolojia vaovao maoderina dia fizarana sokay fanaovana kajy siansa kokoa miaraka amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fihenan'ny angovo, ny mekanisation ary ny automatisation. Satria ity teknolojia ity dia mandray ny teknolojia famafana maoderina, dia afaka mampiasa angovo tanteraka izy, indrindra ny entona mandoto ny tontolo iainana ho loharanon-kery ary mamadika ny fako ho harena. Tsy miaro ny tontolo iainana ihany io fa mamokatra sokay tsara kalitao sy mora vidy koa. Ny tombony mivantana sy tsy mivantana, tombontsoa ara-toekarena sy sosialy dia tena goavana. Izany no maha-zava-dehibe ny lazany ny lafaoro sokay teknolojia vaovao.
2. Karazan-teknolojia maoderina amin'ny lafaoro
Misy lafaoro mifangaro amin'ny alàlan'ny solika, izany hoe solika matevina, coke, vovoka coke, arina arina ary baomba. Ny lafaoro gazy dia misy entona fandoroana lafaoro, etona vita amin'ny lafaoro coke, gazy vita amin'ny kalsioma karbida, entona lafaoro, gazy voajanahary sns. Araka ny endrik'ilay lafaoro, misy kilao zina, lafaoro rotary, lafaoro tanany, lafaoro Vimast (Alemana Andrefana), lafaoro Melz (Soisa), Fucas (Italia) sns. Mandritra izany fotoana izany dia misy kilaometatra fandidiana tsindry tsara sy lafaoro fandidiana tsindry ratsy. Ny lafaoro mifangaro maoderina miaraka amin'ny 800 metatra toratelo isan'andro dia ambanin'ny 500 sy ny kilao misy gazy maoderina misy metatra 250 metatra toradroa, indrindra ny famonoana angovo sy ny fiarovana ny tontolo iainana miaraka amin'ny etona lafaoro sy ny fandoroana entona lafaoro coke, novolavolaina sy nohaingoina. Ny famolavolana sy ny fanamboarana ny "lafaoro kilaometatra lava" dia namaha ny olan'ny fandoroana ny sandan'ny kaloria sy ny etona fohy ny entona lafaoro coke, izay afaka mampiasa tanteraka ny entona lafaoro coke sisa tavela. Avy amin'ny entona lafaoro coke tany am-boalohany ny "jiro", mandoto ny tontolo iainana ho lasa angovo sarobidy ho an'ireo orinasa hamorona tombontsoa. Ho an'ny orinasa vy sy vy kely sy salantsalany, ny orinasan-koka, ny orinasa karbida kalsioma ary ny indostrian'ny mahery dia tena mahavonjy angovo, fiarovana ny tontolo iainana, fahombiazana ary fomba mahomby.
3. Ireo fitsipika mifototra amin'ny fotokevitra sy ny paikadin'ny teknolojia
Ny singa lehibe amin'ny vatosokay dia ny calcium carbonate, raha ny singa lehibe amin'ny sokay kosa dia ny calcium oxide. Ny fitsipika ifotoran'ny sokay mandoro dia ny famoahana ny karbaona kalsioma ao anaty vatosokay ho lasa limonidan'ny kalsiôida oksidana sy gazy karbonika miaraka amin'ny hafanan'ny hafanana ambony. Ny endrik'izy ireo dia
Ny fizotrany dia ny vatosokay sy ny solika hafanaina ao anaty lafaoro sokay (raha omena ny fantsom-panafody gasikara sy ny mpandoro) ary hodiovina 8 degre 850, vita amin'ny 1200 degre, avy eo nangatsiaka sy nesorina tao anaty lafaoro. Ny fizotran'ny fanaovana kajy feno dia mitovy amin'ny fanatontosana anaty kaontenera mihidy. Ny endrin'ny lafaoro isan-karazany dia samy manana ny fomba fanainganana mialoha, ny fanaovana kajy, ny fampangatsiahana ary ny fomba famoahana lavenona. Na izany aza, ny fitsipiky ny fizotrany sasany dia mitovy ihany: ny maripana fanaovana kajy dia 850-1200 degre, ny hafanan'ny preheating dia 100——850 degre. Ny maripanan'ny lavenona dia ambanin'ny 100 degre. Ny kalitaon'ny akora dia avo, ny kalitaon'ny sokay tsara; avo ny sandan'ny kaloria solika, kely ny fanjifana habe; ny haben'ny poti-vatosokay dia mifanaraka amin'ny fotoana anaovana kadika; ny mari-pahaizana momba ny haingam-pandeha dia mifanitsy amin'ny fotoana anaovana ny fanaovana kajy sy ny mari-pana amin'ny fanaovana kajy.
Previous: Fahavetavetana tanànan'ny Joda- 300 taonina / andro kilao X4 Voasarimakirana ao Luoyang, tetik'asa Henan Province-EPC
Manaraka: Fivoriamben'ny tsipika famokarana sokay
Cache System Ny vatan'ny hopper dia rafitra quadrilateral, ny rindrina anatiny dia omena takelaka baffle, ny seranana manafosana dia miforona eo anelanelan'ny takelaka baffle roa mifanakaiky, ary ny faran'ny ambany amin'ny sosona manaraka an'ny takelaka baffle dia omena efijery mihetsiketsika . Ny firafitry ny fitaovana dia tsotra, afaka mahatsapa ny fiasan'ny buffer sy ny fitehirizana vonjimaika amin'ny alàlan'ny takelaka baffle, ny fitaovana latsaka eo ambanin'ny efijery mihetsiketsika dia mitovy fanamiana kokoa, ny asany dia ny pro ...
Fitaovana Hydroxide Kalsioma, Fitaovana famokarana kalsioma Hydroxide, Manao Hydroxide Kalsioma, Famoronana Hydroxide Kalsioma, Kalsioma oksida sy kalsioma Hydroxide, Anaran'ny varotra calcium oxide,